Abiy Ahmed oo Cabdi Iley u gudbiyey warqad go’aan xasaasi ah uu ku gaaray | JIGJIGA.NET
Abiy Ahmed oo Cabdi Iley u gudbiyey warqad go’aan xasaasi ah uu ku gaaray
Published on July 10, 2018 by admin · No Comments
Warar soo baxaaya ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha dalka Ethiopia Dr Abiy Axmed uu wado qorsho lagu xiraayo Xabsiyada ku yaalla dhulka Somaalida Itoobiya.
Ra’isul wasaare Abiy ayaa Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley) u gudbiyay warqad lagu qeexay in dhaqan galinta talaabada lagu doonayo in lagu xiro Xabsiyada waaweyn sida Jeelka loo yaqaan “Jeel Ogaden”. Jeel Ogaden ayaa inta badan waxaa lagu xiraa maxaabiista ONLF, gaar ahaan kuwa lagu qabto howdka dagaalka iyo kuwa laga soo dhiibo dowladaha jaarka la ah Ethiopia iyo waliba shacab tiro badan.
Ra’isul wasaare Abiy Axmed, ayaa la xaqiijiyay in Cabdi Iley uu ku wargaliyay in dhammaan maxaabiista loo heysto kiisaska waaweyn dib loo furo gal dacwadeedkood si ay u helaan cadaalad, halka kuwa kale loo wareejinaayo Xabsiyada kale ee ku yaala magaalada Addis Ababa.
Abiy Axmed waxa uu ka digay in Xabsiyada ku yaala magaalada Jigjiga ay sii furnaadan, waxa ayna xogtu tibaaxeysaa in furnaanshiyaha loo ogolyahay keliya Xabsiyada yaryar iyo Saldhigyada oo lagu sii heyn doono maxaabiista inta lagu hayo baaritaanka.
Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamud cumar ( Iley ) ayaa muddo kooban loo siiyay inuu ku faarujiyo Xabsiyada waaweyn oo ay ku jiraan kuwo ku yaalo buuraha, halka qaarna ay ku yaalan dhulka hoostii.
Sidoo kale, Abiy ayaa qorshaha xirista Xabsiyada Jigjiga uga gol leh kasbashada dhammaan maamulada hoostaga dowlada Ethiopia.
Dhinaca kale, Abiy ayaa rumeysan in dadka ugu badan ee xiran ay yihiin kuwo loo heysto tuhun isla markaana lamarin baaritaan dhab ah